डिशहोमको दशैंमा डवल धमाका, हरेक हप्ता २ जनालाइ जनही एक लाख ! - सिम्रिक खबर
डिशहोमको दशैंमा डवल धमाका, हरेक हप्ता २ जनालाइ जनही एक लाख !
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालका दूरजराजमा समेत टिभीको सेवा प्रदान गरि मन जित्न सफल भएको डिशहोमले आफ्नो ग्राहकहरुलाइ दशैमा डबल अफर दिने भएको छ । हालसम्म डिशहोमले “डिशहोम मा डिलर दाईको डिस्काउन्ट” नामक अफर संचालन गर्दै एक बर्षको एकैपटक रिचार्ज गर्नेहरुलाइ विशेष पुरस्कार दिइएको छ । तर वडा दशैको अवसरमा भने डिशहोमले यसलाइ डबल धमाका बनाएको भनेको छ ।दशै तिहारको उपलक्ष्यमा २४ महिना रिचार्जमा डबल धमाका अफर ल्याएको हो ।
यस अफरमा डिलरदाई मार्फत फन्ड ट्रान्सफरबाट बाषिर्क रिचार्ज गर्दा विक्ली लक्की ड्रमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ भने २ बर्षे रिचार्जमा सातामा डबल मौका प्राप्त हुनेछ । हप्तामा २ जना भाग्यशाली ग्राहकहरुले प्रति व्यक्ति रु एक लाख नगद नगद जित्ने मौका रहेको छ । बिजेताको घोषणा डिजिटल प्रणालीबाट ग्राहकहरुको डिशहोम सेटअप बक्सको क्यास आईडीको आधारमा गरिन्छ । हरेक हप्ताको शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको सोकेश च्यानल नम्बर १००, र रमाईलो टिभीमा लक्की ड्र को प्रत्यक्ष प्रशारण हुन्छ । अनलाइन मार्फत ५ हजार वा सो भन्दा माथि रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुलाई पनि यो अफरमा सहभागी गराईने छ । फन्ड ट्रान्सफरबारे अधिक जानकारीको लागि देशभर रहेको डिशहोम बिक्रेता, नजिकैको डिलर वा डिशहोमको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । डिशहोमले विभिन्न मौकामा यस प्रकारका अफरहरु ल्याई रहने गरेको छ भने केही महिना देखी डिलर दाईको डिस्काउन्ट अफर पनि चलिरहेको छ ।